'Maatiin barattoota 'ugguraman' jedhamanii yaaddoo keessa jirra jedhanis dhimmichi akkuma hibboo ta'etti jira' - BBC News Afaan Oromoo
'Maatiin barattoota 'ugguraman' jedhamanii yaaddoo keessa jirra jedhanis dhimmichi akkuma hibboo ta'etti jira'
27 Amajjii 2020
Yunivarsiitii Dambi Doolloorraa nageenya isaaniif sodaachuun gara maatii isaaniitti deebi'aa osoo jiranii dargaggoota hin beekamiinin barattoonni ugguraman jedhaman ammayyuu dhimmi isaanii deebii hin arganne.
Barattoonni kun erga ugguraman jedhamee guyyaa 50 guuteera. Torbee sadii dura barattuu Asmaraa-kan uggura jalaa miliqxe jedhame, otoobisii keessa osoo jiranii akka ugguraman dubbattee turte.
Warreen ugguraman 18 keessaa 13 dubartoota tahuu kan himtu Asmaraan erga miiliqxeen booda dhimmicha qaama nageenyaaf beeksisuu himti.
Maatiin barattootaa kunneen ugguramuu kan beekan Sadaasa 24/2012 yoo tahu erga ugguramanii torbee lamaaf bilbilaan isaan argachaa turan.
Kana booda garuu barattoota kana as jiru kan jedhe hin jiru.
Kana booda itti-gaafatamaan Pirees Seekireetarii Ministira Mummee Obbo Niguusuu Xilaahuun Televizhinii Biyyaalessaa Itoophiyaatti dhiyaachuun, barattootni 21 gadhiifamuu himuun, jaha ammoo harka warra ugguran jala jiru.
'Barattoota ugguruu keessaa harka hin qabnu'
Barattoota 'ugguraman' jedhaman keessaa 21 gadhiifaman
Gaazexeessitoonni EBC maaliif biyya deemanitti hafuu?
Lakkoofsi kun garuu kan barattuun Asmaraa jedhamtu akka miliqxe himtuun wal hin simu.
Maatiin barattootaa garuu ijoolleenis tahe mootummaan namni isaanitti haasa'ee beeku akka hin jirre dubbatu.
Dhimma barattoota ugguraman kana ilaalchisuun ibsa EBC irratti Obbo Nigusuun kennaniin alatti odeeffannoon mootummaarraa bahe hin jiru.
Barattoota Yunvarsiitii Dambidoollootti ugguramuu maatiin himatan
Gaazexeessaan BBC gara magaalaa Addis Zaman lafa maatiin ijoollee jiranitti imale waan taajjabe nutti himeera.
Maatiin gaddaan fuulli isaanii gurraacha'etu isaan arge kan jedhu rippoortariin BBC maatiitti haasa'uun ulfaataa ture jedha.
Warra ugguraman keessaa abbaa ishee tokkoo kan tahan,''Gaafa Amajjii 2 gadhiifaman yoo nuun jedhan gammadnee turre. Hanga ammaa garuu ijoollee keenya hin argine, mootummanis waan nuun jedhe hin jiru jedhu.
Nu jalaa du'aniiru tahaa jennee sodaataa jirra. Kanarratti ijoolleen waan arganii hin beekne gaafa argan ni nahu jennee yaaddoofna.
Du'aanis yoo tahe tokkoodhumasaa nutti himanii boonyeee osoo gadi teenyee wayya, akkanatti guyyuu maal tahan jenneen dhiphachuu mannaa jedhu.
Guyyaa ijoolleen isaanii ugguraman jedhamerraa kaasee yaaddoodhaan sagalee isaanii dhagahuuf eeggataa jirra jedhan.
"Yaaddoo keenyaaf qaamni deebii kennu dhabamuu isaa dhiphina keenya baay'iseera," jedhu.
Pireezidantiin itti-aanaa Naannoo Amaaraa Obbo Laaqa Ayyaalew maatii barattootaa muraasatti haasa'era jedhu.
Akka biyyaatti tattaaffiin ijoollee kana gadhiisiisuuf jiru xiqqoo waan taheef dafnee deebii argachuu hin dandeenye jedhu.
"Keesumaa mootummaa naannoo Oromiyaafi Federaalaa xiyyeeffannoo kennuun ijoollee kana gadhiisiisu qaba," jechuun TV naannoo Amaaraatti dubbataniiru.
Iyya Miidiyaalee hawaasaa
Ugguramuun barattoota kanaa erga dhagahamee kaasee duulli ijoollee kana akka gadhiifaman gaafatu jalqabeera. Guyyoota muraasa dura garuu iyyannoon fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa darana cimee itti fufee jira.
Lammiileen Itoophiyaa beekamoonillee duula kanarrtti hirmaachuu jalqabaniiru. Miidiyaa hawaasaa Twitter irratti immoo #Bringourgirlsback #Bringourstudentsback #WhereAreTheStudents? kan jedhan fa'iin duulli adeemsifamaa jira.
Naannoon Oromiyaa bakka Yunivarsiitiin Dambii Doolloon itti argamu kun garuu ajaja Koomaand Post jala bulaa jira.
Dabalataan neetoorkiin teeleekoomii hin jiru.
Barattoota eenyutu uggure?
Pirees Seekireetariin ministeera mummee Obbo Niguusuu Xilaahuun barattoota ugguraman keessaa 21 gadhiifamuu haa himaniyyuu malee, eenyu akka isaan uggure, eessaa akka gadhiifaman, maaliif maatii isaanii waliin akka wal argan hin taasifamne kan jedhu irratti deebii hin kennine.
Kana malees, lakkoofsi barattoota naannoon Amaaraa ugguramaniiru jedhaniifi kan mootummaan Federaalaa gadhiisiseera jedhu garaagarummaa qabaachuun, waan burjaajeessaa taheera.
Barattuu Asmaraan akkatti ugguraman gaafa ibsitu, Dambii Doolloofi Gaambeellaa giidduu magaalaa Suud jedhamtu yeroo geenyu dargaggoonni qaamaan nu caalan konkolaataa dhaabsisanii nu ugguran, dargaggoonni yeroo isaan ugguran hidhannoo akka hin qabne dubbatti.
Barattoota kana kan uggure eenyu akka tahe yoo beekamuu baatellee,WBO hogganaa Jaal Marroo jala jiran tahuu hin oolu tilmaama jedhu kaasu.
Barattoonni erga ugguramaniin booda BBC waliin gaaffiifi deebii taasiseen Jaal Marroon,''kana ani isinirraan dhagahaa jira. Kaayyoon qabsoo keenyaa barattootaa waliin wal hin argu. Waan barattoota irratti raawwatame jedhames nuti harka keessaa hin qabnu. Akkuma barame maqaa keenya xureeessuufi malee gochaa akkanaa ammas gara fuulduraattis hin raawwannuu,'' jedheera.
BBC erga baratoonni kunneen ugguraman jedhameen booda qondaalota mootummaa argachuuf tattaafachaa jira. Haa tahu malee deebii qabatamaa tahe hin arganne.
Obbo Nuguusuu Xilaahuunis biras odeeffannoo akka nuuf kennan irra deeddeebinee gaafannus bilbila isaanii hin kaasani.
Itti gaafatamaan koomunikeeshinii Naannoo Amaaraa Obbo Geetinnat Yirsaawfi itti gaafatamaan waajira nageenyaa Obbo Aganyahu Tashaagar argachuuf yaaliin irra deddeebiin taasifne hin milkoofne.
Itti-gaaftamaa itti aanaan waajira bulchiinsaa fi nageenyaa Naannoo Oromiyaa Koloneel Abbaba Garasuu deebisaa naan bilbilaa erga jedhaniin booda, hayyamamoo hin taane.
Marroo Dirribaa: 'Akkuma barame maqaa balleessuuf malee barattoota ugguruu keessaa harka hin qabnu'
15 Amajjii 2020
Barattoota Yunvarsiitii Dambi Doolloo 'ugguraman' jedhaman keessaa 21 gadhiifaman
11 Amajjii 2020
"Jibba Tigiraayi irratti qaban sirreessiisaa ykn biyya of dandeesseedha jechuun labsaa,'' Dr Dabratsiyoon
Lubummaan koree hundeesitoota mana lubummaa Oromiyaa qabame
Xiyyaaronni lama qilleensarratti walitti bu'uun lubbuu namaa galaafate